Ny fanandraman'ny ankizilahy tao amin'ny 'Meno' an'i Platon
Inona no manaporofo ny hetsika malaza?
Iray amin'ny andalan-tsarimihetsika malaza indrindra amin'ny asa soratr'i Platon rehetra - amin'ny ankapobeny ny filôzôfia - dia mitombo eo afovoan'ny Meno. Mangataka an'i Socrates i Meno raha afaka manaporofo ny fahamarinan'ny fanambarana hafahafa nataony izy fa "ny fianarana rehetra dia fitadidiana" (fitakiana izay mampifandray an'i Socrate amin'ny hevitra momba ny vatana vaovao indray). Mamaly i Socrates amin'ny fiantsoana zazalahy andevo ary, aorian'ny nanamafisana fa tsy nanana fampiofanana matematika izy, dia nametraka olana momba ny geometry.
Ny olana ara-tsosialy
Ilay zazalahy dia nanontaniana ny fomba hananganana ny kianjan'ny kianja iray. Ny valiny fahatokiany voalohany dia ny hahatratrarana izany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny halavan'ny andaniny. Socrates dia mampiseho azy fa raha ny marina dia mamorona avo efatra heny noho ny teo aloha izy. Avy eo ilay tovolahy dia nanoso-kevitra ny hanitatra ny halavany amin'ny antsasany. Manamarika i Socrates fa mety hamadika kianja 2x2 (faritra = 4) mankany amin'ny kianja 3x3 (faritra = 9). Amin'izao fotoana izao, ilay zazalahy dia mametraka ary manambara ny tenany amin'ny fahaverezana. Avy eo i Socrates dia mitarika azy amin'ny alalan'ireo fanontaniana tsotra arahina amin'ny valiny marina, izay ny fampiasana ny diagonal ny kianja tany am-piandohana no fototra iorenan'ny kianja vaovao.
Ny fanahy tsy mety maty
Araka ny voalazan'i Socrates, ny fahafahan'ilay zazalahy hanatratra ny marina ary ny manaiky izany ho toy izany dia manaporofo fa efa nahazo izany fahalalana izany tao anatin'izany izy; Ny fanontaniana napetrak'izy ireo fotsiny dia "nanetsika azy io", izay nanamora ny fahatsiarovany azy. Etsy ankilany, nanamafy izy fa satria ilay zazalahy dia tsy nahazo fahalalana toy izany tamin'ity fiainana ity, dia tokony ho efa nahazo izany izy taloha; Raha ny marina dia milaza i Socrates fa tokony ho fantany foana izany, izay midika fa ny fanahy dia tsy mety maty.
Ary koa, izay naseho ho an'ny jeometria dia mitazona ho an'ny sampana hafa fahalalana: ny fanahy, amin'ny lafiny iray, dia efa manana ny marina momba ny zava-drehetra.
Ny sasany amin'ireo fanakianana an'i Socrates eto dia somary lavalava ihany. Nahoana isika no tokony hino fa ny fahaizana voajanahary azo eritreretina matematika dia midika fa tsy mety maty ny fanahy?
Sa efa manana fahalalana miafina momba ny zavatra toy ny teoria momba ny evolisiona, na ny tantaran'i Gresy isika? Socrates mihitsy aza, raha ny marina, dia miaiky fa tsy azony antoka ny sasany amin'ireo fanatsoovany. Na izany aza, heveriny fa ny fanehoan-kevitra amin'ilay zazalahy dia manaporofo zavatra iray. Fa manao izany ve? Ary raha izany, inona?
Ny fomba fijery iray dia ny porofo manaporofo fa manana hevitra voajanahary isika - karazana fahalalana izay azontsika teraka ara-bakiteny. Ity fotopampianarana ity dia iray amin'ireo fifandirana indrindra amin'ny tantaran'ny filôzôfia. Descartes , izay voataonan'i Plato mazava tsara, dia niaro azy io. Manaporofo, ohatra, izy fa Andriamanitra dia mametraka ny hevitry ny Tenany amin'ny eritreritra tsirairay izay nohariany. Satria ny olombelona rehetra dia manana io hevitra io, misy ny finoana an'Andriamanitra. Ary satria ny hevitra momba an'Andriamanitra dia ny fisian'ny toetra lavorary tsy manam-pahataperana, dia ahafahana fahalalana hafa izay miankina amin'ny filazalazana momba ny tsy hita sy ny fahalavorariana, ny hevitra tsy azontsika avy amin'ny traikefa.
Ny fotopam-pinoana momba ny hevitra voajanahary dia mifamatotra akaiky amin'ny filozofa rationalista mpandinika toa an'i Descartes sy Leibniz. Nanafika mafy an'i John Locke izy, voalohany tamin'ireo mpamaky britanika lehibe indrindra. Boky Iray amin'ny fanontanian'i Locke momba ny fahalalan'olombelona dia fifanoherana malaza manohitra ny fotopampianarana iray manontolo.
Araka ny Locke, ny saina ateraky ny fahaterahana dia "tabilà rasa," tsy misy dikany. Ny zavatra rehetra fantatsika amin'ny farany dia avy amin'ny traikefa.
Hatramin'ny taonjato faha-17 (rehefa nanokatra ny asany i Descartes sy Locke), ny fisalasalana momba ny empiricista momba ny hevitra voajanahary dia amin'ny ankapobeny. Na dia izany aza dia naverin'ny mpandalina Noam Chomsky ny dikan-teny iray avy amin'ny fotopampianarana. Chomsky dia voan'ny mahavariana mahatalanjona ny ankizy tsirairay amin'ny fiteny fianarana. Tao anatin'ny telo taona, ny ankamaroan'ny ankizy dia nahay ny fitenin-drazany ho toy ny hoe afaka mamokatra sazy ambaratonga fototra tsy voafetra. Izany fahaizana izany dia mihoatra lavitra noho izay azony nianarana amin'ny alalan'ny fihainoana izay lazain'ny hafa: ny vokatra dia mihoatra lavitra noho ny fidirana. Milaza i Chomsky fa ny fahafahana manao izany dia fahaizana voajanahary amin'ny fiteny fianarana, ny fahafaha-manaiky ny fiantsoana ny "fitsipi-pitenenana iraisam-pirenena" - ny rafitra lalina - ny fizarana ny tenin'olombelona rehetra.
Na dia hitan'ny mpikamabana vitsivitsy ankehitriny aza ny foto-pampianarana momba ny fahalinana voajanahary hita ao amin'ny Meno , dia mbola mitazona ny fomba fijery ankapobeny izay fantatsika ny zavatra sasantsasany a priori-izany hoe talohan'ny traikefa. Ny matematika, indrindra indrindra, dia heverina haneho ny karazana fahalalana toy izany. Tsy tonga amin'ny teôrstèm ny rafitra na aritmetika isika amin'ny fitadiavana fikarohana ara-tsaina; Manamarina ny fahamarinana tahaka izao isika amin'ny alalan'ny fisainana. Socrates dia afaka manaporofo ny heviny amin'ny fampiasana sariohatra voasokitra amin'ny teboka iray ao anaty vovoka saingy tsapantsika avy hatrany fa marina sy mahitsy tokoa ny hevitra. Mihatra amin'ny kianja rehetra izy io, na inona na inona goavan'izy ireo, na inona na inona ataon'izy ireo, rehefa misy izy ireo, na aiza izy ireo.
Maro ireo mpamaky no mitaraina fa tsy mahita ny fomba hananganana ny kianjan'ny kianja iray io zazalahy io: i Socrates no mitarika azy amin'ny valinteny amin'ny fanontaniana mitarika. Marina izany. Azo inoana fa tsy tonga tao amin'ilay valiny ilay zazalahy. Fa ity fanoherana ity dia tsy mahavaha ny tebitebin'ny fihetsiketsehana: ilay zazalahy dia tsy mianatra afa-tsy rôles iray izay mamerina azy avy eo tsy misy fahatakarana marina (ny fomba ataontsika amin'ny ankapobeny rehefa miteny zavatra toy izany isika, "e = mc quared"). Rehefa manaiky izy fa misy ny soso-kevitra marim-pototra na marina ny fehezanteny iray, dia manao izany izy satria takany ny fahamarinan'ilay raharaha ho an'ny tenany. Amin'ny fitsipika, noho izany, azony atao ny mamantatra ny hevitr'io andalana io, sy ny maro hafa, amin'ny fisainana mafy. Ary dia toy izany koa isika rehetra!
Plato's Meno (lahatsoratra)
Teny filôzôfika momba ny sakafo
Fahaizana momba ny filôzôfôma: Fahalalana amin'ny alalan'ny saina
Ao amin'ny Filôzefm of Honesty
Tatitra momba ny fitsarana
Wisin & Yandel - 'Duo De La Historia' an'i Reggaeton
Manaova sary mihetsika mahafinaritra
Famakiana ny fanaraha-maso ny fandinihan-tena
Seve Ballesteros: Mahatsiaro ny Spanish Golf Giant
Toute la información importante sur ses étimes de ciudadanía
Ny fivoaran'ny ady na ny valin'ny valiny
Andavanandro amin'ny alalan'ny Solar System: ny Oort Cloud
Zavona manokana avy amin'ny Daughters About Reny
Teny amin'ny lalana Appian - Sarin'ny lalana sy ny trano
Inona avy ny Loko orthogonale?
Tezcatlipoca - Aztec Andron'ny alina sy ny fifohana sigara
Ny fampiasana ny fialan-tsiny mba hijerena ny zava-misy marina
Ny tantaran'i Ferdinand
University of Texas ao amin'ny El Paso Admissions
Ady lehibe faharoa: USS Hornet (CV-12)
Ny Alakamisy Masina ve ny Andro Fanomezan-tsiny?
6 Fanontaniana Angataho Mialoha ny Andao Mpikambana ny Pagan
Ny Libero amin'ny Volleyball: Mpanolo-tsaina fahavalo
Tokony hahazo salama fianarana MBA ve aho?
Famaritana ny rakitra Data amin'ny PHP
Fomba hanatsarana ny voambolanao
Balanced vs Unbalanced, Piston vs Diaphragm - Fitsipika fototra ho an'ny mpangataka